03/09/2005: Submitted for publication via web
Kuma ayuu ahaa Cabdilaahi Suldaan Maxamed "Timacade"
by Abdifatah O. Abdi
Abdilaahi Suldaan Maxamed "Timacade"
Cabdillaahi Suldaan Maxamed oo ku caan-baxay (Timacadde), wuxuu ku dhashay Galoolley, oo ku taal duleedka magaalada Gabiley, sida in badan oo taqaanay rumaysan tahay, isla markaana uu xaqiijiyay Isaaq Cismaan Maxamed oo ay Timacadde ilma-adeer ahaayeen. Hooyadii waxay ahayd Xabiiba Seed Guuleed.C/laahi Suldaan markuu geeriyooday 1973-kii, wuxuu ahaa 53-jir, sidaa darteedna wuxuu dhashay 1920-kii. C/laahi Suldaan wuxuu ka dhashay qoys beeralay ah, waxaanu ahaa madi. Wuxuu ku koray degmada Galoolley oo ay beer ku lahayeen, halkaas ayaanu ka galay malcaamad-qur’aan.
C/laahi Suldaan markii uu Jabuuti tegay, halkaa waxay ku kulmeen Barni Jimcaale oo kal-gacal xoog lihi u galay, tix uu u tiriyayna laga hayo halku-dhegga ah; "Barni ina Jimcaalaan helee, sow bar dahab maaha."
C/laahi Suldaan, markuu dalka soo degayba wuxuu ka qaybgalay halgankii
gobonimo-doonka ahaa ee dalka ka hana-qaaday. Wuxuu markiiba ku biiray ururkii SNL oo ay xaruntiisu ahayd Hargeysa, halkaas oo ay kasoo baxeen gabayadii ugu badnaa ee Timacadde ee marxaladdaa ku beegnaa.
1969-kii, markay ciidamadii qalabka siday taladii dalka kula wareegeen
inqilaabka, C/laahi Suldaan dadweynaha Soomaaliyeed ayuu la qaybsaday dareenkii wanaagsanaa ee lagu soo dhoweeyay, iyadoo maamulkii madaniga ahaa laga khatoobay, isla markaana laga rajo-dhigay, shacbigu way u heellanaayeen is-beddel dhaca. Ididiiladii iyo rajadii dadweynaha gashay waxay ahayd in wax is-beddeli doonaan oo weliba sida ugu roon isu beddeli doonaan.
C/laahi Suldaan, 7/12/1972-kii, ayaa laga soo qaaday Galoolley oo la geeyay Kala-baydh, halkaas oo uu ku dhintay 6/2/1973-kii. Bishii February 7dii, 1973-kii, subaxnimadii ayaa meydkii Tima-cadde laga soo qaaday Kala-baydh, iyadoo si wanaagsan loo sii gelbiyayna, waxa lagu aasay Gebilay, naxariistii Janno Ilaahay ha ka waraabiyo
Hadaad u sii baahantahay in aad wax badan ka sii ogaatid taarikhdii cabdilaahi Suldaan Maxamed "Timacade" waa tan hoos ku qoran iyada oo ah maqal:
Taariikhdii Timacadde 1
Taariikhdii Timacadde 2
Tima cade iyo sidii uu wanaaga u fari jiray somalida xumaantana ugu sheegi jiray bal aynu wax ka soo qaadano gabayadii uu umada soomaaliyeed ku hagi jiray:
Qeebta dhagaysiga ama maqalka ah: Qeebta qoraalka ama Akhriska Ah:
Abdifatah O. Abdi
The views published here are solely those of its authors (Abdifatah O. Abdi) and do not necessarily reflect those of REDSEA-ONLINE.COM.